Anio no hotanterahina etsy amin’ny biraon’ny CENI Nanisana ny fivoriana mikasika ny fanaraha-maso ny lisitry ny mpifidy eto Madagasikara.
Ireo masoivoho na iraka avy eo anivon’ny rafitra iraisam-pirenena misahana ireo tany miteny frantsay na OIF moa no hiandraikitra izay fanaraha-maso izay.
Tsy ry zareo avy eo anivon’ny OIF ihany anefa no hisahana izay fanaraha-maso izay fa nanamafy koa ry zareo avy eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena omaly fa mba hanana izay mpanara-masony ihany koa izy ireo. Miisa 6050 mahery izy ireo, raha ny voambara tetsy Ambatonakanga omaly.
Ny kaompania teatraly malagasy Landy volafotsy sy ny avy atsy La Réunion Lolita Manga no hiara-kisalahy hanatontosa ilay tantara tsangana mitondra ny lohateny hoe Manonoké fanahy etsy amin’ny IFM Analakely rahampitso. Fampivadiana ny tantaran’ny Printsy Manonoké avy eto Madagasikara sy ny tantaran’i La Réunion moa no tanjona, raha ny fanazavana.